Zvakaoma kusarudza chete 5 Easy Day trip From Milan By Train kuti mugove nemi. Italy fashoni guta iri Yakanaka Zvikuru pamwe nzira nokuda kushanyira nzvimbo. Kwete chete ari izvozvo akazara fashoni, asi ane incredible kare, akitekicha uye nzvimbo dzokuona dzakanaka to write home about.
Parwendo rwacho zviripo: ichi ndicho steepest njanji rwendo munyika, akwira kubva 429 metres kusvikira pamusoro 1800 in the Swiss mountains. The stunning alpine scenery viewed from the train window will mean you will not want to leave the train.
Uchava anoguma muguta Swiss pamusoro St. Moritz, mumwe Switzerland vakawanda plesieroorde gomo yakakurumbira. This is where the rich and famous spend their holidays or own a chalet.
St. Moritz anoita chawo akakwana kuongorora rwezasi Canton pakati Graubunden. Hazvina pakadarowo chakanaka zuva achienda dzimwe Switzerland, sezvo zvaizoitika Zvaringana nguva kufamba. Ndizvo, zvisinei, mumwe pamusoro yedu 5 Day Trips From Milan By Train kunyange! Kunze Nightlife muguta, huru zvinhu pano vari panze. Kana uchida musango, cu kana mitambo chando, unogona ufare kwevhiki iyi dzinokatyamadza munharaunda.
Kuchovha kuti funicular kubva pasi kusvikira kumusoro muguta, uye tora Ngatitarise Bergamos zvinokosha sezvivako, dzakadai St. Maria Maggiore Cathedral uye Colleoni Chapel.
Last, asi kwete muduku, musakanganwa kutora nguva kunzwisisa Bergamo incredible unopoteredza, nezvikomo Munotatamura kwemakiromita, nzira yose kusvika kure Lake Chemhondoro.
The Franciacorta Nharaunda inopa zvimwe zvinoshamisa, mubayiro kuhwina waini kuti mharidzo, pakati nakisisa Italian girl.
Nzvimbo Franciacorta DOCG Kunoumbwa pamusoro 3,000 hectares mizambiringa kufukidza zvimwe zvinoshamisa yevedza ndima rinopfungaira chete kumaodzanyemba Lake Iseo muna Italys Lombardy nharaunda. Izvi mukati nekusvipirwa kure vakawanda zvimwe yakakurumbira Italian kumatunhu waini, akadai Piedmont kumavirira uye Conegliano Valdobbiadene (musha nakisa shoma Prosecco) to the east.
Ichi chikuru nzvimbo inoita Franciacorta kuenda wakakwana nokuda kudanana uchapukunyuka kana yakakodzerwa tsime rwendo waini, chete ane maawa okugumburisa kubva Milan, it is accessible and beautiful in equal measure.
Pamazita Yedu 5 Day Trips From Milan By Train zvaisazova kwakakwana pasina kusanganisira Venice! Chii chingava nani pane kutora rimwe zuva rwendo kubva kuMilan mumwe Italy vandinokoshesa chaizvo maguta uchidanana, Venice? Kunyange zvakaoma aenderane yose Venice zvinofadza kupinda chete zuva rimwe, unogona zvirokwazvo edza.
Dzichidzungaira kwayo tonhorera, cobbled migwagwa. Iva kofi iri rakakurumbira Piazza San Marco. Perhaps even stretch to riding a gondola through the canals for a truly special experience.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Easy Day trip From Milan By Train” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-milan-train/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Bergamo comolake Masikati EuropeByTrain milan Train Travel chitima kufamba Mazano travelvenice